Sina : Ireo Fandaniam-bolam-bahoaka Telo Sy Ny Tsiambaratelom-panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2011 10:22 GMT
Ny teny hoe “ireo fandaniam-bahoaka telo” na san gong jingfei, dia miainga avy amin'ireo fandanian'ny governemanta noho ny fivoahana mankany ivelany, sakafo sy fialamboly ary ny fiaram-panjakàna. Ireo fandaniana telo ireo no noheverin'ny vahoaka manontolo ho toy ny tena fototry ny kolikoly ho an'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta.
Tamin'ny May 2011, ny Fahitalavitra Foibe mpampita vaovaom-Panjakana dia namoaka fa fandaniam-bola isan-taona ho an'ireo fandaniam-bola telo dia tafakatra ho 1900 lavitrisa RMB[zh] ho an'ny firenena ny taona 2010, manome ny 60% ‘ny fandaniam-bolam-panjakana rehetra. Ho fifehezana ny fandaniana, ny Ministeram-Panjakana dia nitaky ny hanomezan'ireo departemanta sy birao 98 mazava tsara ny “fandaniam-bolam-bahoaka telo”-n'izy ireo.
Ny 30 Jona 2011, ny Komity Mpitantana ny Kaongresy Nasiônalim-bahoaka dia namoaka ampahibemaso ny “fandaniam-bolam-bahoaka telo”-n'ny Governemanta Foibe. Tafakatra ho9.4 lavitrisa RMB [zh] ny salan'isa (manodidina ny 1.5 lavitrisa USD). Na dia teo aza ny fanoherana, hatreto ny ankamaroan'ny departemanta sy birao 98 ao amin'ny governemanta foibe no namoaka ny fandanian'izy ireo. Kanefa tao anatin'ny roa andro lasa, ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny (MFA), Raharahan'ny Sinoa any Ivelany (OCA) ary ny Raharahan'i Macao sy Hong Kong (HKMA) dia nilaza fa tsiambaratelom-panjakana ny” fandaniam-bolam-bahoaka telon”-n’ izy ireo.
Satria nahazo fanohanana avy tamin'ny vahoaka ny hetsiky ny Ministeram-panjakana ho amin'ny fangaraharan'ny tetibolan’ ny fandaniam-bolam-bahoaka telo (tamin'ny fitsapan-kevitra natao ny Jolay 2011, mihotra ny 96.4% tamin'ireo natao fanadihadiana no nanohana izany [zh], ny fialantsiny hoe ” tsiambararatelom-panjakana” dia nolavin'ny ankamaroan'ireo vahoaka Sinoa ankitsirano. Ity ambany ity ny sariitatra iray, an'i Zhai Haijun, maneho ny hasarotry ny fitondràna fanovàna ao amin'ny governemanta mikasika ny olan'ny “fandaniam-bolam-bahoaka telo”.(avy amin'ny China Media Project).
Ilay bilaogera He Jun dia manondro fa ny “tsiambaratelom-panjakana” dia ala olana iray hiarovana tombotsoa sy kolikoly.
Ilay bilaogera He Jun dia manondro fa ny “tsiambaratelom-panjakana” dia ala olana iray hiarovana tombotsoa sy kolikoly:
Fanazavana mahaliana momba ireo tsiambaratelom-panjakana. Zatra nihevitra foana isika fa ny fanamboarana ny balafomanga, ny toby miaramila, torohay mifandray amin'ny fanavaozana ny fikarohana, ny vola ary ireo mineraly tsy fahita firy sns. dia tsiambaratelom-panajakana. Ankehitriny ny ” fandaniam-bolam-bahoaka telo” an'ireo olona ambony ao amin'ny governemanta izay mandany ny hetrantsika, ny vola miditra ho an'ny firenentsika amin'ireo fiara, sakafom-panasàna, fandehandehanana ary ireo tombontsoa maro samihafa amin'ny fandaniana manokana, no nanjary ” Tsiambaratelom-panjakana”!
Izay Sinoa misitraka ny tombontsoa manokana azo avy amin'ny atao hoe ” tsiambaratelom-panjakana” dia tokony hanaraka ny fitsipika apetrany. Raha tsy hay tohaina ny hamamin'ny valisoany–tsy ho tsy matotra indray ianao, hiaino fotsiny ny fahafinaretana amin'ny maha tsiambaratelo azy. Ny tokony ataonao dia mipetraka eo ambony sehatra miaraka amin'ny endrika izay mampatsiahy ny vahoaka ny Marksisma, Leninisma, ireo Solotena Telo, ireo Fanatontoloana Efatra, ireo Fepetra Telon'ny Fitsipika ary ireo Teboka Valon'ny Fitandremana, tsy hahamarika na inona na inona ny vahoaka. Tsy hita maso ny vahoaka. Ankoatra izany dia arovan'ireo “tsiambaratelom-panjakana” isika.
Notsikerain'i Lisa tamin'ny fomba fijery nasiônalista iray ny MFA noho ny diplômasia ny tsy nahomby:
Tsy takatry ny saina ny antony mahatonga ny MFA hanao fandaniana goavana amin'ny “Fandaniam-bolam-bahoaka Telo” amin'ny filazana fa ny andraikiny dia ny fifandraisana amin'izao tontolo izao. Ny olana mipetraka dia ny hahalalana hoe mety hoatrinona ny laninao ary namana firy no azonao…Andeha ho jerentsika. Firy ireo nosy any amin'ny ranomasina atsimo no mbola eo am-pelatanan'ny Sinoa? Firy ireo mpanjono sy tantsambo sinoa mbola voafonja tsy amin'antony any amin'ny firenen-kafa? Ho fanaovana sorona ny tanintsika amin'ilay antsoina hoe tontolo iainana feno filaminana, ho fakàna namana an'ireo mpiray vodirindrina amintsika amin'ny fanambaniana ny tenantsika ihany. Manontany tena aho hoe fomba ahoana no nandanian'ny MFA an'ireo ” fandaniam-bolam-bahoaka Telo”-ny?
Nandaniana vola be, nefa mbola very ny tanintsika. Eny fa ny MFA dia minia tsy manena “ny fandaniam-bolam-bahoaka telo”. Kanefa, mbola sahy ihany ny mampiasa ny “tsiambaratelom-panjakana” hanafenana ny henatr'izy ireo. Tena lainga be izany.
Tao amin'ny Weibo, dia nisy adihevitra maromaro natao momba ity hevitra fototra vaovao mikasika ny “tsiambaratelom-panjakana” ity. Ireto ambany ireto ny fifantenana ireo valinteny nalefan'ireo mpampiasa Weibo avy hatrany tao amin'ny vaovao vaovao nalefan'ny 21cbh [zh]:
天边火林中风 Mba fomba ahoana no nandrafetan'ny MFA ny tatitra ara-bolan'izy ireo farany? Ahoana no ahafahan'izy ireo mametraka ny tsiambaratelom-panjakana anatin'ny resaka fandaniam-bolam-bahoaka telo?
老狼_深圳 Lanian'izy ireo ny volantsika, ny hany angatahantsika dia ny rosia nefa sahin'izy ireo ny milaza amintsika fa tsiambaratelom-panjakana izany!!!
峰回路转转路回峰 Raha vao hitan'ny heri'ny fahavalontsika ny fandaniam-bolantsika midangana be, dia ho fantatr'izy ireo ny tanjaky ny MFA-ntsika
李晋宁AARON Chen Shui Bian [Filoham-pirenen'i Taiwan Teo aloha] dia nampiasa ny fialàna bala mitovy amin'izay ihany koa mba hiarovany ny kolikoliny. Raha niziriziry ny tsy hamoaka ny fandaniam-bolam-bahoaka telony ny MFA, dia tokony tsy hiankin-doha amin'ny Mininteram-panjakana, fa mety hanimba ny governemanta manontolo izany.
风一逸 ny savorovoro eo amin'ny fanjakana dia efa tsiambaratelom-panjakana, mazava ho azy.
共和一体fandaniana ny volam-bahoaka aminà sakafom-panasàna, fandehandehanana sy fiara, nahoana no tsy ho azo haseho ampahibe-maso izany ? Raha tsy ohatra angaha ka manakarama mpitsikilo maro isika.
Fanehoan-kevitra maro [zh] avy amin'ireo Lohatenim-baovao nalefan'ny Weibo :
飘泊在南方的云 Na dia mamoaka aza ry zareo, azontsika itokisana ve fa tena marina izy ireo?
法拉盛上官 Ireo sampan-draharaha hafa izay namoaka ny fandaniam-bolan'izy ireo dia tsy maintsy hanenina, ahoana no tsy nieritreretan'izy hampiasa ny “Tsiambaratelom-panjakana” ho fialantsiny.
lemon5212011 Tsy maintsy nanefa ny fandanian'ny fianakaviany sy ny saram-pianarana any ivelany izy ireo ary mamahana ireo alikany tavela mikarenjy aty an-tanindrazana, mazava loatra fa tsy afaka hamoaka antontan'isa izy ireo.
蘇奕安 ny dikan'ny hoe “fandaniambolam-bahoaka telo” dia fiara, sakafom-panasàna ary fitsangatsanganana. Inona no zavatra iraisan'izany amin'ny tsiambaratelo? Niara-nisakafo sy niara-dia taminà vondrona mpampihorohoro ve izy ireo??